Google di elu n'elu Apple n'ogo nke ulo oru kacha baa uru n'uwa | Esi m mac
Alphabet Inc. bu ezigbo ụlọ ọrụ na - ejide ụlọ ọrụ bụ ndị ụfọdụ dị ka Google na n'ezie bulie mkpanaka gaa ụlọ ọrụ kachasị baa uru n'ụwama ọ bụ mebie Apple. Companylọ ọrụ a na-ejide teknụzụ mara ọkwa ụnyaahụ, Mọnde, nsonaazụ dị mma karịa ka a tụrụ anya ya, na-enye ndị ọ joyụ ọ joyụ ma gosipụta nnukwu ikike nke ụdị azụmaahịa ya.
Ọrụ na isi azụmaahịa rịrị elu 23% na 2015. Ndị na-achụ ego na ngwaahịa na-enwekarị mmasị na nke a. rịa elu 8% na arụmọrụ ndị ọzọ na mmechi, nke mechiri ụbọchị azụmaahịa nwere ọnụọgụ ruru $ 559.130 dị iche na nke Apple nke 538.700 ijeri, na mgbakwunye ịbụ ụlọ ọrụ izizi mebiri akara ọkara ijeri dollar na Ọktọba.
Nke a bụ oge mbụ mkpụrụedemede ị nyela ọnụ ọgụgụ akọwapụtara maka azụmahịa gị, ya bụ, ego sitere na njin ọchụchọ Google, YouTube, Android, Google Play ... na maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ so na nkwekọrịta a, dịka Google X (ụlọ ọrụ nyocha ya), Calico (ụlọ ọrụ biotechnology ya), Google Fiber (nnukwu ọsọ )ntanetị) ma ọ bụ akwu nke na-etolite ngwaọrụ ụlọ dị mma n'etiti ndị ọzọ.
Agbanyeghị na ahịa nyocha Scott Kessler ekwuolarị na ọ ka dị oke mmalite ịmalite mgbịrịgba ahụ nakwa na a ga-elekọta ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, ebe ọ bụ na (na m na-aguputa) «Enwere ọtụtụ nsogbu gbasara iwu na usoro iwu nke nwere ike ibili n'afọ a wee bụrụ isi ọwụwa».
Maka nke ya, Ruth Porat, CFO na Mkpụrụ Okwu egosiwo na ụlọ ọrụ ahụ na-elezi anya na mmefu:
Nnukwu ego anyị na-enweta na nkeji nke anọ nke 2015 na-egosipụta ịdị mkpa nke azụmahịa anyị, nke a na-achọ site na mkpanaka ekwentị, yana YouTube na mgbasa ozi mmemme, mpaghara niile anyị etinyeworo ego kemgbe ọtụtụ afọ. Obi dị anyị ezigbo ụtọ banyere ohere anyị nwere site na Google na nzọ ndị ọzọ iji jiri teknụzụ mee ka ndụ ọtụtụ ijeri mmadụ ka mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Google dị n'elu Apple na ogo nke ụlọ ọrụ kachasị baa uru n'ụwa
Ngwakọta Ngwakọta Na-aga n'ihu Na-aga n'ihu Maka Ndị Mmepe